Jose Mourinho oo wajahaya labo kulan oo ganaax ah – Gool FM
Jose Mourinho oo wajahaya labo kulan oo ganaax ah
Byare November 28, 2016
(Manchester) 28 Nof 2016. Jose Mourinho ayaa lagu wadaa inuu wajaho labo kulan oo ganaax ah kaddib markii labaad oo garoonka laga saaray halka sarana loo diray isla xilli ciyaareedkan.
Macallinka reer Portugal ayaa lagu amray inuu garoonka ka boxo kaddib markii uu si wayn uga mudaaharaaday kaarka jaalaha ee la siiyay Pogba kulankii xalay ay bar-baraha la galeen West Ham mar uu si been ah dhulka isugu tuuray.
Waa markii labaad kal ciyaareedkan oo laga saaro garoonka halka sarena loo diro Jose kaddib kulankii ay bar-baraha 0-0 la dhaafi waayeen kooxda Burnley bishii October.
Waana markii saddexaad uu isla garsoore Jon Moss uu garoonka ka saaro macallinka dabeecada qalafsan, sanadkii hore kulan dhex maray West Ham iyo Chelsea kolkaa uu Jose ka ariminayay Stamford Bridge, sidoo kale 2014 kulan uu ku wajahay Aston Villa markaa uu Jon Moss uu ahaa garsooraha afaraad ee kulanka iyo waliba kulankii xalay.
Jose ayaa jinni isku riday isla markaana darbeeyay caagada biyaha mar kaarka jaalaha la siiyay Pogba oo si been ah dhulka isugu tuuray, waxaana lagu wadaa inuu seego kulanka soo socda ee Man United iyo waliba kulanka EFL Cup ay la yeelan doonaan isla West Ham.
Macallinkii hore ee Chelsea ayaa qeytbii labaad ee ciyaartii xalay go’aansaday inuu ka daawado qol gaar ah halkii uu dib ugu soo laaban lahaa garoonka isla markaana uu halka sare ka daawan lahaa.
“Sidan uguma guuleysan karno La Liga.”. Pique oo ka deyriyay qaabka ay ku socoto kooxdiisa Barcelona
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey guushii ay Arsenal ka gaartay Bournemouth… (Gunners oo guuldarro la’aateeda xiriirka ah sii wadata iyo Alexis Sanchez oo noqday xiddiga labaad ee..)